Dalxiis Dalxiis Xogta Himachal Soo wac @ + 91-993.702.7574 Goob-degitaan.
Dalxiis Dalxiis oo la yaab leh
Himachal, dhul kaas oo naftaada kor u qaadaya. Ku faraxsan qurux badan oo dabiiciga ah, Himachal Pradesh waa janno dalxiis. Bandhigga safarka ee Himachal wuxuu kaa qaadi doonaa safar nololeed. Trekking, rafting, neefta dhagaxyada, barbaarinta, rashaadka iyo waxyaabo kaloo badan ayaa lagu raaxeeyaa Himachal, taas oo ku siinaysa fursad aad ku baran karto gobolka si kale duwan oo aad u abuurto xasuusiyo aad u qadariso noloshaada oo dhan. Dhibaatada ka sokow, waxaa kale oo jira fursadda lagu raaxeysto quruxda dhulka dabiiciga ah ee Himachal. Iyo Dalxiis Holidays oo la yaab leh waa habka ugu wanaagsan ee lagu raaxaysto baaxadda dhulka. Meesha quruxda badani waxa lagu qurxiyaa dabeecada oo leh buuro saafi ah, muyaal mucjiso ah oo qoryo geed leh, muuqaal jilicsan. Ama aad tahay balan qaadasho isboorti ama aad rabto inaad waqti ku qaadato tayada qoyskaaga, asxaabtaada fasax; meeshan ayaa wax walba u haya qof walba. Quruxda quruxda buuraha ee xooggeeda buuxa leh oo leh Amitabhong Holiday Tour. Dawladu waxay u taagan tahay marka la eego kala duwanaanshaha muuqaalka iyo muuqaalka quruxda dabiiciga ah. Dhulka Himachali wuxuu heystaa magnetism noocaas ah oo ay soo jiidato dabeecada dabiiciga ah ee dunida oo dhan. Muuji sahankan cajiibka ah ee safarkeena Dalxiiska ee Xasuuqda ah.
Barnaamijka Habeenkii 10 | Code Code: 150
Markaad timaaddo garoonka diyaaradaha ee Chandigarh / saldhigga tareenka, soo qaad oo u kaxee Shimla. Shimla, oo ah caasimadda xagaagii hore ee British India, ayaa ku dhexjirtay buuraha Shivalik, oo soo bandhigay qaar ka mid ah aragtida ugu quruxda badan ee Himiladaas xooggan. Markaad timaaddo Shimla baaritaanka hudheelka. (Habeenkii Shimla)
Maalintaan ka dib quraacda waxay u socotaa dibad-u-baxa gudaha iyo hareeraha Shimla oo booqo Kufri. Xerada sare ee mitirka 2,622, Kufri waxay caan ku tahay socodka socodka iyo socodka socodka, iyo barafka lagu daboolo barafka iyo qulqulka. Goobaha galabnimo waxay ku qaadaan safar socod ah oo Shimla ah, booqo jasiiradaha Jakoo kuwaas oo bixiya aragti muuqaal ah ee magaalada, Ku xigeenka Regal Lodge ama socodka wadada. (Habeenkii Shimla)
Maalintaan quraacda ka dib Jooji oo ku wado Manali. Isku day inaad kaamiradaada ku hayso, si aad u qaadato sawirrada goobaha dabiiciga ah sida webiga beas, dooxada Kullu, Dashehra gabadha iwm. Markaad timaado Soo gal hudheelka. Manali waa muraayad buuran oo muuqaal leh oo dherer sare leh oo mitirka 1,929 ah oo ku taalla dusha sare ee barafka, quruxda Manali waxaa ku hareeraysan webiga beas iyada oo biyo nadiif ah, oo la marinayo magaalada. Dhamaan hareeraha waxay arkayaan geedo deodar ah oo geedo, geedo yaryar iyo geedka miro. Xilliga abooska ee dhaqdhaqaaqyada shakhsiga ah (Habeenkii Manali).
Maalintaan ka dib quraacda waxay ku sii socotaa dibadbaxyada Manali, booqo dhismaha 450 sano jir ah oo loogu talagalay Hadimba Devi, oo soo bandhigaya qaar ka mid ah alwaaxyada. Sidoo kale booqo Manu Temple iyo Vashisht Kund, oo lagu yaqaano ilo kulul oo kulul. Xilliga duhurka ah ee bilaashka ah ee dukaanka Soomaliya. (Habeenkii Manali).
Maalintaan ka dib quraacda hore waxay u socotaa wadada Barafka ee Rohatang. Doolow ku joogso dooxada Solang. Rohtang pass (height height 3940) waa 51 km oo laga soo bilaabo Manali, laakiin sababo badan oo baraf ah oo la daboolay waddooyinka, kaarkani ma aha mid u muuqan kara bilaha 8 ee sanadka. Abaalmarinta Manali iyo waqti xor ah oo loogu talagalay waxqabadyada waqtiga firaaqada. Haddii waddooyinka Rohtang Pass la xiro ka dibna booqo Barafka Barafka (midabyada / fardaha si toos ah ayaa loo kiraysan karaa). Habeenimadii Manali.
Meel fog oo ah 260 kilomitir oo ku taalla waddada Baijnath ee loo yaqaano Macbadka Shiva iyo weliba Palampur caanka ah ee loogu talagalay Tea Garden. Dharamhsala waa buur buur oo ku yaala xeebta Dhauladhar oo ku saabsan 18 km waqooyi-bari ee Kangra, Waxaa loo yaqaanaa quruxdiisa muuqaal qurux badan oo leh geedo sare iyo geedo geedo. Tan iyo markii 1960, markii uu noqday xarun ku-meel-gaadh ah oo ka mid ah Joogitaankiisa Dalay Lama, Dharamshala wuxuu u kicitimay caalamka "Little Lhasa in India". O / N Hotel
Ka dib markii ay quraacdu ka soo baxdo Dharamshala dhinaca Dalhousie ka dib markii la samaynayo goobaha maxalliga ah ee ka mid ah, Daliilkiisa qarsoodiga ah lama degan yahay Mc Leodgunj, xusuusta dagaalka, Baalash Sacuud iyo Dal Lake. Soo gal Dalhousie fiidkii. O / N Hotel
Dalhousie ayaa loo magacaabay ka dib markii uu ahaa Guddoomiyaha Golaha Wakiilada - Guud ee qarnigii LIXaad, Lord Dalhousie. Dhexdhexaadiya dhir kala duwan - geedo, dodders, oak iyo rhododendron ubax. Dalxiisayaasha maxaliga ah ee kuyaala Dalhousie waxaa ka mid ah booqashada Panjipula, Subhash Baoli iyo dalxiiska Khajjiar 9 oo ka yimid Dalhousie oo ku wareegsan Beeraha Deield. Ka soo dagista Dalhousie ilaa Khajjiar waa mid cajiib ah. O / N Hotel
Kadib quraac, ka hubi hudheelka iyo u wareejinta Amritsar. Later waxay sii wadaan inay booqdaan Temple Golden, Jalyanwala Bagh & Waga Xuduudda. Amritsar oo deg deg ah.
Maalintaan quraacda ka dib Jooji oo ku wado Chnadigarh. Markaad timaaddo Chandigarh si aad u hesho jeegga. Habeenimadii Chandigarh.
Maalintaan ka dib quraacda, ka soo jeeda Hotel ka dibna sii wad safarka dalxiiska ee Chandigarh. Booqo Rock Garden. Gelitaanka aan la qabin wuxuu horseedaa nidaam qumman oo qoto-dheer, dhagxaan, qashin, shinaware jebiyey, tuubo dhaadheer, qasacado dhoobo, qashin, dhuxul iyo dhoobo-oo dhan oo loo qurxiyo si loo abuuro riyo qurux badan oo hoy ah, askar, dameeraha, nolosha tuulada, haweenka iyo macbadyada. Later transferred to garoonka diyaaradaha ee Chandigarh / tareenka halkaas oo safar dhammaado.